Raw YK-11 powder (431579-34-9) Vaiti - Phcoker Chemical
YK-11 powder ndeyeboka rekusarudza androgen receptor modulators (SARMs). Kunyanya, chii chinonzi YK11 ......
Unyanzvi: 1470kg / mwedzi
Raw YK-11 powder (431579-34-9) video
Raw YK-11 powder (431579-34-9) Tsanangudzo
YK11, inozivikanwawo seMyostine, inoonekwa seimwe yeSARM dzakasimba pamusika. Iyo yakagadzirwa steroidal selective uyerogen receptor modulator. Iyo mishonga inobata vanabolic in vitro muC2C12 myoblasts uye inoratidza simba rinopfuura dihydrotestosterone (DHT) munyaya iyi. YK11 zvakare is Myostatin inhibitor. vanogona kukubatsira kuti uwane musimba uye urege kurasikirwa nemafuta.
Raw YK-11 powder (431579-34-9) Specifications
Product Name Raw YK-11 powder
Kemikari Name YK11, (17a, 20E) -17,20 - [(1-Methoxyethylidene) bis (oxy)] - 3-oxo-19-norpregna- 4,20-diene-21-carboxylic Acid Methyl Ester; YK11 ((17α, 20E) -17,20 - [(1-methoxyethylidene) bis- (oxy)] - 3-oxo-; DNA (Terrabacter strain YK11 16S rRNA gene fragment); GenBank AB070463
Kirasi yeMishonga SARM
Molecular Wsere 430.53386
Kunyorera Point 190-200 ° C
Biological Half-Life 6-10 maawa, zvichienderana neumwe munhu
ruvara Yakachena yakasimba
Skukodzera Propylene Glycol, DMSO, Ethanol
Storage Temperature Kutsigira kwekamuri
Raw YK-11 powder APane Selective Androgen Receptor Modulator, Myostatin Inhibitor
Raw Raw YK-11 powder (431579-34-9) Tsanangudzo
Vazhinji vashandisi vanofunga kuti YK11 ndiyo inokosha yekuzarura muviri wakakwana wehutano uye kubudirira kukurumidza kusvibiswa nemisungo nemigumisiro miviri. YK11 inoratidzika se-super-SARM yakavakirwa kubva kuongorori, asi muchokwadi, ichi chirwere hachisi chechimiro cheSARM. Ichi chinyorwa chinoputsa sayenzi nekuongororwa kukupa pfungwa yakajeka yezvaunotarisira kubva mune iyi SARM-steroid hybrid, ine njodzi nemigumisiro.
Yakataurawo kuti YK11 inokwanisa kuderedza myostatin, ichiita myostatin inhibitor. Iyo YK-11 inoputika isiri imwe yezvisimba zvikuru kunze uko. Iwe haugone kuenzanisa YK ne LGD-4033 kana chero imwe SARM nekuda kwekuti yakasimba zvakadini.
Zvisinei, kunyange zvazvo YK-11 poda yakasvibiswa yakasimba zvikuru inoramba ichiyeuka kuti pane zvidzidzo zvishomanana chete zvakaitwa nechikamu ichi. Ichi ndicho chikonzero chikuru vanhu vakawanda vanoita kunge vachienda neSARM yakafanana neOstamuscle, RAD-140 kana GW-501516.
YK11 iri kuwana ruzivo kubva kune vanovaka muviri nemhaka yekukwanisa kwayo kukurumidza kuumba musuru neine madhara, zvakadai seSARM dzakasiyana-siyana. Chimiro cheYK11 chakasiyana. Iyo YK molecule inowedzera zvimwe zvakafanana ne-steroids kupfuura SARM, kunyange zvazvo kazhinji inowanzoiswa nenzira isina kukodzera mubhakiti rimwechete sezvose zvisiri steroidal SARM.
Rimwe shanduro yekudzidzira inoratidza kuti YK11 inowedzera musimba mashoma. Vatsvakurudzi vakawana kuti inowedzera mapuroteni ekugadzira follistatin (a myostatin inhibitor).
YK11 inogonawo kuwedzera utano hwemapfupa. Mune chidzidzo pamasero epafupa, YK11 yakawedzera mazinga emapuroteni ekuvaka mapfupa.
Vamwe varimi vomuviri vakaedza YK11 vanorondedzera kuwanda kwemasumbu uye kurasikirwa kwemafuta nezvishoma madhara. Zvisinei, pane iye zvino hapana mhuka kana zvidzidzo zvevanhu zveYK11 uye kuchengetedzwa kwayo hakusi pachena.
Raw YK-11 powder (431579-34-9) Mushonga Wekuita
YK11 ine chimiro chakafanana chemakemikari kune DHT uye izvi zvinoratidzwa nenzira iyo inosungirirana ne androgen receptors. Mutumbi unobereka DHT zvakasikirwa nechinangwa chokusimudzira utano hwe prostate, kukura kwebvudzi, uye kukodzera kufambira mberi kwekuyaruka.
Dai taizoenda kukirasi YK11 seSARM saka ndiyo ndiyo yakasimba uye yakanyanya kunaka kwayo pamusika. Izvi ndizvo zvinongobatsira uyerogen receptors zvishoma, izvo zvinokonzera basa remagetsi uyerorogenic kupfura nepadenga. Mukuwedzera, YK11 inozivikanwa se myostatin inhibitor.
Vatsvakurudzi vakaita sero rekuongorora kuti rinoshanda sei kuvaka musumbu. Migumisiro inoratidza kuti inongova nechinangwa chokuwedzera follistatin maitiro. Follistatin mumwewo anowanzoita mapuroteni mumuviri womunhu unobatsira kuchengeta myostatin mukutarisa. Myostatin ihomoni inobata basa rekudzivirira kusagadzikana kwemasimba kukura.
Kusvika ikozvino, YK11 chete pfumbu yakasviba inokwanisa kukanganisa myostatin.
Uhu humwe uchapupu hunoratidza kuti YK11 inogona kukurudzira kukwakuka kwemapfupa nekupindira negedhi rinoshanda seDHT.
Benefits yeRw YK11 powder (431579-34-9)
◆ Inowedzera Muscle Size
Kunyange zvazvo YK11 isiri SARM yega, ine unyanzvi hunoshamisa hwokukurudzira musimba kukura. Zvinonzi yakasimba seS23.
Ndizvo zvinowedzera kuwedzera follistatin maitiro ayo anowedzerawo muviri wako kukwanisa kubudisa masero masero. Follistatin inobatsirawo kubvisa myostatin, nokudaro nekuzarura iwe kusvika pakukwanisa kwekusagadzikana kwemisimba kukura. Asi kana follistatin migumisiro inodziviswa munzira ipi zvayo, ipapo myostatin inhibition haigone kuitika, iyo inogona kuita kuti YK11 isabatsire.
Kwete kuzonzwika secheka rakaputsika asi hapana munhu kana mhuka dzinoongorora kudzivirira dheta pamusoro pezvikamu izvi.
Zvose zvatinazvo ndezvehupupuriro hwehutano hwehutano hunovakirwa kuburikidza nekuongororwa kwemuviri pamusangano. Zvavanotitaurira ndezvekuti vakwanisa kuwana huwandu hwekuderedza mafuta uye 15 lbs zvakakosha zvemuviri wechipfuva zvinowanikwa munguva shoma.
◆ Inosimbisa Bones
Hemoni inokosha inokosha pakuchengetedza mapfupa akasimba uye ane utano. Uchapupu hunowanikwa hunoratidza kuti YK11 pfumbu yakasviba inogona kuwedzera simba rekudzivirira nekuzvisunga pachayo kune androgen receptors, iyo yakafanana nezvinoitwa neSARM dzakawanda.
YK11 inogonawo kuwedzera huwandu hwePKB (protein kinase B) inowanikwa mumasero emuviri anobatsira kukura kwemasero epafu.
Ngatisakanganwe kuti unoda kuva nemasimba, utano hwakanaka uye mapfupa kuti urege kuputika. Inogona kukwanisa munyaya iyi zvakare nokuti inoshanda chaizvo pakuvaka musuru, kubatsiridza mararamiro emapfupa nekudzikisa migumisiro yepafu fragility.
Yakakurudzirwa Raw YK-11 powder (431579-34-9) Dosage
Madzimai anove akashandisa YK11 pfumbi yakasara inoti kuitora mumataji e10 kusvika 15 mg pazuva kunoshanda zvakanaka kwavari. Vamwe vakataura zviitiko zvakanaka pa 5 mg pazuva. Vazhinji vashandisi vanoitenderera ku4 kusvika kumavhiki e8. Iwe uchaonawo vashandisi vanoisa SARM dzakasiyana pamwe chete.
Zvikanganiso ye Raw YK-11 powder (431579-34-9)
▲ Kusvika ikozvino, zvidzidzo zvemasero chete zvakaitwa paYK11.
Hapana humwe hutachiona hwehutachiona kana kunyange zvidzidzo zvemhuka kuti adzose chero chezvimwe zvinotaurwa zviri kuitwa pamusoro pemishonga.
Izvi zvinofanira kukuita kuti iwe ufunge kaviri pamusoro pekutsvakurudza neichi chikwata. Zvichida unofanirwa kuongorora zvakasiyana siyana zvakadai seOstarine uye Ligandrol. Vane ruzivo rwakawanda uye tsvakurudzo iripo.
Zvinonzi YK11 inogona kutyisa chiropa. Kunyengedza kutaura, zvinogona kukanganisa bvudzi kukura, mutambo wezwi, hutano hweprotate uye dzimwe nhengo dzinokosha mumuviri.
YK-11 Purogiramu uye Zviitiko Pfungwa kubva kune Vashandi vechokwadi
Thevis, M., Piper, T., Dib, J., Lagojda, A., Kühne, D., Packschies, L., ... & Schänzer, W. (2017). Misa inoratidzikisa mararamiro emusarudzo uyerogen receptor modulator (SARM) YK-11 nokuda kwekuita doping zvinangwa. Rapid Communications kuMisa Spectrometry, 31(14), 1175-1183.
Kanno, Y., Ota, R., Someya, K., Kusakabe, T., Kato, K., & Inouye, Y. (2013). Selective androgen receptor modulator, YK11, inoronga myogenic kusiyana kweC2C12 myoblasts ne follistatin kutaura. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 36(9), 1460-1465.
Piper, T., Dib, J., Putz, M., Fusshöller, G., Pop, V., Lagojda, A., ... & Thevis, M. (2018). Studies on the in vivo metabolism ye SARM Y1K11: Kuzivikanwa uye kugadziriswa kwemetabolites zvingave zvakakosha pakushandura doping. Kuongorora zvinodhaka uye kuongorora, 10(11-12), 1646-1656.
Ibutamoren Mesylate (MK677) powder, inozivikanwawo seMK677, MK-677, MK-0667, uye L-163,191, ......
Unyanzvi: 1249kg / mwedzi
S-23 powder ndeyomumuromo inonzi bioavailable, nonsteroidal selective uyerogen receptor modulator (SARM) yakaratidza kuti inowedzera kuoma .......
Unyanzvi: 1360kg / mwedzi